Aluminum Louver Panel, igwe anaghị agba nchara Mgbochi Wall, Glass Wall Systems - Altop
Aluminom Solid Panel Series
Igwe anaghị agba nchara Series
Ákwà mgbochi mgbidi / Ohere mgbidi & Door & Window
Steel Ọdịdị Series
America oru ngo
Australia oru ngo
Chinese Chile oru ngo
Middle East oru ngo
Southeast Asia oru ngo
Ọrụ Hong Kong na Macao
Innovation nke sayensị & technology eduga n'ọdịnihu
Tinyere ngwa uto nke mba ewu ahịa, ndị mmadụ choro maka metal ewu ihe owuwu na ngwaahịa na-amụba ụbọchị. Iji izute ahịa chọrọ na-soro ahịa na ọnọdụ, Altop facade Co., Ltd. mụrụ echiche nke "na-aghọ a tozuru okè, ọkachamara na pụrụ iche ụlọ usoro mwekota na-eweta ọrụ". Ọrụ anyị, tụnyere R & D, imewe, mmepụta, ahịa na nwụnye na otu, na-ewepụtara na-enye onye na-akwụsị ọrụ ekpuchi ume-azọpụta ákwà mgbochi mgbidi windo na ibo ụzọ, aluminum ngwaahịa, igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa, ákwà mgbochi mgbidi ígwè owuwu na ngwa na high- tech ọdịnaya.
Research na mmepe
Banyere nnyocha na mmepe
Nye ahịa na saa mbara ma zuru ezu ụlọ ọrụ ngwọta na mgbe-sales oru nkwado, na-eme na ezubere iche maka nnyocha na mmepe izute ahịa mkpa.
About ngo imewe
Na-omimi analysis nke oru ngo, na "ejiji, ngwa, adigide mmepe, gaje" dị ka Ụkpụrụ nduzi, incorporating ọhụrụ nkà na ụzụ imewe echiche.
About ngwaahịa mmepụta
Anyị nwere a factory nke banyere 40,000 square mita, onwem na dị iche iche elu space akara ngwá na spraying mmepụta edoghi, zụrụ nke ọma ọkachamara mmepụta otu, echesinụ àgwà akara ụkpụrụ usoro mmepụta, nnyocha na njem.
About ngwaahịa ahịa
E nwere ọtụtụ ngwaahịa & ọrụ ikpe na Middle East, Australia, na North America, Southeast Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara. Anyị ga-anọgide na-agbaji site n'etiti na elu-ọgwụgwụ ahịa ebe na isi nke ụwa.
Company na nnyocha na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, echichi.
Ihe karịrị afọ iri nke ụlọ ọrụ ahụmahụ.
iru eru Asambodo
Mmadụ Bịa ka denye aha na mkpa na ozi, anyị ga-ezitere gị ozi nke mmasị gị igbe akwụkwọ ozi.
Oru nkwado: Globalso
igwe anaghị agba nchara Glass Mgbochi Wall , Igwe anaghị agba nchara Mgbochi Wall, igwe anaghị agba nchara oghere Ball ọkpụkpụ , igwe anaghị agba nchara okirikiri ọkpụkpụ ,